टेबल हेटरहरू परिवर्तन गर्दै - iSearch
सुरु बच्चा र बच्चा पोषण र केयर परिवर्तन तालिका उज्ज्वल हीटर
एक परिवर्तन तालिका उज्ज्वल हीटर बच्चाहरु वा बच्चाहरु संग परिवार मा अनिवार्य छ। यो आमाबाबुको लागि आत्म-स्पष्ट छ कि साना क्षितिजहरू आफूलाई लपेटो र सम्भवतः न्यानो र सुक्खाको रूपमा स्नान गर्नु पर्छ, किनकी विशेष रूपमा रात वा स्नान पछि तिनीहरू चिसो हुन्छन्। गर्मी मा बच्चाहरु लाई पनि एक लाभकारी प्रभाव छ र उनको मूड बढ्छ। यसले तिनीहरूलाई बजाउन मन लाग्छ वा आमा वा बुबाको साथ चिन्ता गर्छ, जसले बांडलाई प्रोत्साहन दिन्छ। एक परिवर्तनशील तालिका हीटर खरिद गर्दा, यो खरिद गर्नु अघि धेरै कारकहरू सोच्नु अत्यावश्यक छ।
1 परिवर्तन तालिका तालिका ताप रेडिएटर के हो?
2 परिवर्तन तालिकाको लागि हीटिंग रेडिएटरको सञ्चालन
3 जब ताप, ऊर्जा बचत गर्नुहोस्!
4 परिवर्तन तालिका तालिकाहरू
4.1 एक। अवरक्त हेटरहरू
4.2 ख। क्लासिक हेटरहरू
4.3 व्यक्तिगत मोडेलमा फरक प्रदर्शन छ!
5 संरक्षण र सुरक्षा
5.1 प्रकार्यता र विश्वसनीयता
6 परिवर्तनशील तालिका हीटर किन कहिलेका लागि तपाईं हेर्नु हुन्छ?
7 तापक्रमका प्रमुख निर्माताहरू
8 हामी तपाईलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दछौं दुई आधुनिक ऊर्जाजहाज तालिका तालिकाहरू
8.1 पुन: 1928 2IN1 Feel तालिका मेजर परिवर्तन गर्दा, खडा
8.2 ईनील अवरक्त हीटर IHS 2000 / 1 (2000 वाट,3पावर स्तरहरू, पुल स्विच, 186 सेन्टिमिटर सम्म समायोज्य, अनावश्यक)
परिवर्तन तालिका तालिका ताप रेडिएटर के हो?
der परिवर्तन तालिका उज्ज्वल हीटर एक प्रकारको ताप लैंप हो, जुन सामान्यतया परिवर्तनशील तालिका माथि राखिएको छ कि विन्डिङ प्रक्रियाको समयमा बच्चालाई संकेत गर्दछ। तालिकाहरू परिवर्तन गर्ने प्रयोग सिजनमा, वा बरु, जलवायु परिस्थितिमा बच्चाको लिपिमा निर्भर हुन्छ।
मुख्य फोकस यो विचारमा छ कि बच्चासँग ठुलो जोगिनको लागि पर्याप्त न्यानो कपडा वा डिपर छ। यस अवस्थामा, परिवर्तन तालिका-प्रकार ताप तत्व एक कार्यात्मक सहायता हो जुन संलग्न वा माथि राखिएको वा घुमाइएको बिन्दुमा बच्चाको छिटो नजिक रहेको छ। त्यहाँ पर्खाल र फ्लोर एकाइहरू छन्
जसमा आमाबाबुका लागि फाइदाहरू साथै साना व्यक्तिहरूका लागि फाइदाहरू छन्। तथापि, परिवर्तनकारी तालिका हीटर खरिद गर्दा स्थानिय परिस्थितिहरूलाई बेवास्ता गर्न उपयोगी छैन।
परिवर्तन तालिका तालिकाको कार्यक्षमता एकदम राम्रो हुन्छ। अवरक्त रेडिएटरहरूले गर्दा लक्ष्यमा गर्मी प्रदान गर्ने यन्त्रहरू छन्। यसको मतलब यो कि किने र प्रत्यक्ष परिवर्तनको मात्र सिजनमा प्रत्यक्ष वातावरण सुखद मनपर्दो हुन्छ, बाहिरी कोठा न्यानो भएको छैन। यो पर्याप्त ऊर्जा बचतमा परिणाम!
परिवर्तन तालिकाको लागि हीटिंग रेडिएटरको सञ्चालन
der परिवर्तन तालिका उज्ज्वल हीटर एक दुवै सरल र कुशल प्रकार्य छ, जुन अधिग्रहणको लागि बोल्छ। यस्तो उपकरणहरू बहुमत बटनको धक्का वा ड्रिलिंग बेल्टमा एक पुल द्वारा जडित हुन्छन्। सबैलाई केहि मिनेटको लागि पर्खाइको लागि पर्खनुहोस्। जब एक परिवर्तन तालिका वांछित तापमान पुग्यो, डायपर वा अस्तर परिवर्तन र / वा अस्तर परिवर्तन गर्न सक्दछ।
जब ताप, ऊर्जा बचत गर्नुहोस्!
आधुनिक ताप रेडिएटर मोडेलहरूले लाभ उठाउँछन् कि तिनीहरूले स्विचन पछि तुरुन्तै गर्मी जारी गरे। यसको मतलब आमाबाबुले तपाइँको बच्चालाई परिवर्तन तालिकामा राख्नु अघि लामो समयसम्म पर्खनु पर्दैन डायपर गर्न सक्छन्।
अर्कोतर्फ, क्लासिक मोडेल, यो लाभ छ कि तिनीहरू कमीशन पछि तत्काल वातावरण को। वास्तवमा, यो उच्च ऊर्जा खपतमा परिणाम छ, तर ऊष्माको प्रक्रिया पछि केही समयको लागि महसुस गरिन्छ र यो आमाबाबुको लागि धेरै सुन्दर हुन सक्छ, खासकर ठण्डको समयमा।
आवेदन क्षेत्रहरू र उपकरणहरूको फाइदाहरू
एक परिवर्तन तालिका उज्ज्वल हीटर धेरै फायदा छन्! यन्त्रले यो बच्चा सम्भवतया र रमाइलो बेला बच्चालाई न्यानो र सुखद वातावरण प्रदान गर्न सम्भव बनाउँछ। यदि बच्चा नग्न निचो शरीरको साथ बदलिएको टेबलमा राखिएको छ भने, यो चिसो लाग्न सक्छ किनकि सानातया विशेषतया संवेदनशील हुन्छन् र तीव्र तापमानमा छिटो प्रतिक्रिया गर्दछ। त्यसैले यो सुखद वातावरण को लागी आवश्यक छ जसमा सानो राम्रो लाग्यो र सहज छ।
बच्चा धेरै खुसी छ किनभने उनीहरूको आमाबाबुलाई खेल्नको लागी एक सुखद परिवेशको तापमानको कारण र सङ्कलन सबै अधिक। आमाबाबुसँग मिलेर गहन कुल्ला इकाइहरू प्राप्त गर्ने एक राम्रो मौका हो जसले आमाबाबु-बच्चा बन्धनलाई बलियो पार्छ। आमाबाबुले खेल्नु, कुखुरा र सुन्दर वातावरणमा कुराकानी गर्न सक्दछन् बच्चाहरु लाई आफ्नो परिवर्तन तालिकामा जब यो लिपिँदैछ।
प्रायः बच्चाहरूले पितृको मनपर्ने कपडा बिना मजा लिन्छन्, जसमा तिनीहरू स्वतन्त्र र अपरिचित हुन्छन्। उनीहरूले वर्तमान आमाबाबुको मायालु सहयात्रीलाई पनि आनन्द लिन्छन्। केहीको लागि केहि पनि राम्रो छैन!
"डायपर युग" पछि पनि परिवर्तन तालिकाको ताप रेडिएटर प्रयोग गर्न सकिन्छ। कार्यशाला क्षेत्रमा वा शौक कोठामा, उहाँले क्रिसमस वा ईस्टरको लागि इफेक्टको उत्कृष्ट वातावरण प्रदान गर्दछ।
परिवर्तन तालिका तालिकाहरू
एक। अवरक्त हेटरहरू
आधुनिक परिवर्तन तालिका उज्ज्वल हीटर अवरक्त आधारमा सञ्चालन गर्नुहोस् र परिभाषित क्षेत्रहरूमा मात्र गर्मी जारी गर्नुहोस् जहाँ उच्च तापमान आवश्यक हुन्छ। परिवेश वायु तापिएको छैन, त्यसैले खपत कम राख्न सकिन्छ।
ख। क्लासिक हेटरहरू
क्लासिक मोडेलले अधिक गर्मी दिन्छ र यसको साथ वातावरण प्रदान गर्दछ। एक ठूलो कक्ष भाग गर्मी संग आपूर्ति गरिएको छ। परिणाम रेडिएटर को अधिक हीटिंग लागत हो।
व्यक्तिगत मोडेलमा फरक प्रदर्शन छ!
हीट रेडिएटर मोडेलहरू, जुन स्नान वा बच्चाको कोठामा परिवर्तन तालिकामा तापनि विकसित गरिएको छ, पहिले नै 600 वाटको आउटपुटको साथ प्रभावित। क्लासिक हेटरहरू 1.200 वाटमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
अवरक्त उज्ज्वल हीटरको प्रदर्शन धेरै कम छ, किनकि लक्षित तापमान नियन्त्रण परिवर्तनशील टेबल क्षेत्र को ताप को बिना वातावरण को ताप को लागि पर्याप्त छ। यसले ऊर्जा बचािन्छ!
संरक्षण र सुरक्षा
जब विद्युत उपकरण प्रयोग गर्दा सुरक्षा पक्ष धेरै महत्त्वपूर्ण छ। एक स्वचालित स्विच-अफ अपरिहार्य छ।
यदि परिवर्तनशील तालिकामा हिउँद पछि बिर्सिएको छ भने, यो स्वचालित रूपमा लगभग 10 भित्र 20 मिनेट पछि बन्द गर्दछ। यसले पैसा बचत गर्छ र अग्नि नपुगेको छ।
कृपया खरिद गर्दा यन्त्रको स्वत: स्विच बन्द इलेक्ट्रनिक्समा ध्यान दिनुहोस्। वैकल्पिक रूपमा, एक मध्यवर्ती टाइमर धेरै उपयोगी छ। टाइम स्विच सेट गर्न सकिन्छ ताकि यन्त्र निश्चित समयको पछि स्वचालित रूपमा स्विच गर्दछ।
प्रकार्यता र विश्वसनीयता
आदर्श परिवर्तन तालिका उज्ज्वल हीटर वातावरण न्यानो बिना परिवर्तन तालिका सतहको लक्षित ताप सुनिश्चित गर्दछ। न्यानो-अप चरण ऊर्जा बर्बाद गर्नबाट बचाउन केवल छोटो हुनुपर्छ।
परिवर्तनशील तालिका हीटर किन कहिलेका लागि तपाईं हेर्नु हुन्छ?
जब खरिद गर्दै परिवर्तन-उज्ज्वल हीटर ऊर्जा खपत गर्न। सामान्यतया, शक्तिशाली आधुनिक इन्फ्रारेड टेक्नोलोजीको साथ उपकरण जसले गर्मीलाई मात्र प्रदान गर्दछ।
धेरै यन्त्रहरूले परिवेश वायुलाई तातो बनाउँदछ, जुन विन्डिङ क्षेत्रमा ओभरहेटिङ गर्न सकिन्छ। तातो हावाको विस्तृत वितरणमा धेरै ऊर्जा व्ययसँग सम्बन्धित छ र यसैले उच्च लागतको साथ।
बच्चा केवल आफ्नो परिवर्तन तालिका मा घिमिरे मात्र होइन, तर यो पनि खेल्नु भएको छ र नमिलेको क्यान्सरले खेलिरहेको रेडिएटरको ताप ढालसँग सम्पर्क गर्न सक्छ। यस कारणको लागि, एक उपकरणमा नमी वा गर्मीको संरक्षण हुनुपर्छ त्यसैले स्पार्क वा भाप उत्पादन न्यूनतममा कम हुन्छ।
परिवर्तनशील तालिकाको किन्टर विशेष रूपमा लागत प्रभावी छैन। यसको लागि, आमाबाबुले आफ्नो जेबमा गहिराइ खोल्नुपर्छ।
परिवर्तन-तालिका हेटरहरू आदर्श रूपमा विशेष रूपमा ऊर्जा-बचत तापनि रोडहरूसँग सुसज्जित हुनुपर्छ।
तापक्रमका प्रमुख निर्माताहरू
रियर GmbH उच्च गुणवत्ता वाला इलेक्ट्रोनिक घटकहरुको एक विश्वसनीय र महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता हो, जस्तै: एईजी, बोस्, सीमेन्स आदि। बाट री जीबीएचएचले इलेक्ट्रनिक प्रोडक्ट्स र इलेक्ट्रनिक बच्चाहरु को लागि स्पेयर पार्ट्स पनि उत्पादन गर्दछ।
बोतल न्यानोर्स, परिवर्तनकारी तालिकाको लागि हेटर र धेरै अन्य उत्पादनहरू फोकस हुन्। स्वचालित बोतल गर्मीमा मेबो गरिएको छ रियर उत्पादनको कक्षा, गुणस्तर र उत्कृष्ट मूल्य प्रदर्शन अनुपात।
कम्पनी रोमल्सब्याचर 1928 को स्थापना भएको थियो। यसको उत्पादन सामान्य र इलेक्ट्रनिक बाल वस्तुहरु मा घरेलू विद्युत उपकरण, जस्तै बदलती तालिका हीटर शामिल छ। Rommelsbacher बजार मा सक्रिय एक राष्ट्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तर र यो लगातार लगातार वृद्धि संग।
फेकक समूह क्लेलिङ्गब्याच / बेडेन-वर्तटिम्बर्गमा आधारित छ। कम्पनीले फ्लोरिडा सफाईको लागि प्रणाली र उपकरणहरू मुख्य उत्पादन र विकास गर्दछ। 1950 र 80 वर्षको सुरुवात पछि देखि, थप उत्पादन समूहहरू थप गरीन्छन्, साथै विभिन्न इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू र घर र शिशुको वस्तुहरू जस्ता सामानहरू जस्तै परिवर्तन तालिका तालिकाहरू।
EWT क्लम्बचेकमा ग्लेन डिम्प्लिक समूहको एक स्वतन्त्र सहायक हो। EWT उत्पादनहरू एक अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा हुन्।
इलेक्ट्रिक चिम्नी बर्नरहरू, परिवर्तन गरिएका तालिकाहरू, उदघाटन हेटरहरू र विभिन्न प्रकारका हेटरहरू ईडब्ल्यूडको उत्पाद पोर्टफोलियोमा समावेश छन्।
स्टेबा समूह उच्च-गुणस्तर बेकिंग मशीनहरु, हीटर, ओवन र धेरै अन्य अभिनव इलेक्ट्रनिक उत्पादनहरु को लागि प्रसिद्ध छ। स्टेला लामो समयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा भएको छ र परिवर्तन-तालिका हेटरहरू पनि निर्माण गर्दछ।
हामी तपाईलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दछौं दुई आधुनिक ऊर्जाजहाज तालिका तालिकाहरू
पुन: 1928 2IN1 Feel तालिका मेजर परिवर्तन गर्दा, खडा
रेयर 1928 2IN1 FeelWell परिवर्तन तालिका उज्ज्वल हीटर बच्चालाई ठुलो पार्छ र यसैले सम्भावित नतिजाहरु को रक्षा गर्दछ। यसलाई दुबै र खडाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो ताप रेडिएटरले 400 डब्ल्यू र 800 डब्ल्यूका साथ दुई ताप अवस्थाहरू छन्। यो विशेष गरी लचिलो हुन्छ तापनि एक हेड हेडको लागि जुन 50 ° माथि झुन्डिएको हुन सक्छ। उपकरण एक तर्फबाट एक स्विच स्विच मार्फत स्विच र बन्द हुन सक्छ। ग्राहकहरू यस यन्त्रको बारेमा उत्साहित छन् र यो पूरा स्कोर दिनुहोस्।
Reel परिवर्तन तालिका बत्ती FeelWell 2in1, भित्ता माउन्ट र गैर-रेडिएटि,,2तताउने अवस्था, टाइमर, एन्टि-टिपर, चिकित्सा मानक प्रदर्शन अनुसार परीक्षण गरिएको
सान्त्वना तत्काल गर्मी प्रदान गर्दछ र ठंडा को बिरुद्ध संरक्षण गर्दछ र साथसाथै बीमारहरु
चिकित्सा मानक अनुसार थर्मल विकिरण र तापमान वितरण
2IN1 को पर्खालको वा फर्श इकाईको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ
2 गर्मी सेटिङहरू चयन गर्न स्विच गर्नुहोस्: 400W / 800W (230V)
ईनील अवरक्त हीटर IHS 2000 / 1 (2000 वाट,3पावर स्तरहरू, पुल स्विच, 186 सेन्टिमिटर सम्म समायोज्य, अनावश्यक)
ईइनहेल अवरक्त परिवर्तन तालिका उज्ज्वल हीटर बहुमुखी छ। यसमा धेरै प्रभावकारी क्वार्ट्ज हीटिंग तत्वहरू छन् र 3, 650 र 1300 W को 2000 पावर चरणहरूसँग विनियमित गर्न सकिन्छ। सेट स्विचन चरण प्रदर्शन गरिएको छ। उज्ज्वल हीटरको अवस्थित विरोधी टिप सुरक्षाले टिप गर्दा यो बन्द गर्दछ।
स्ट्यान्डपिप समायोजन योग्य छ। यो हीटर पनि मालिकको द्वारा अत्यधिक मूल्यवान र सराहना गर्दछ। उहाँले मात्र परिवर्तन तालिका राम्रो काम गर्दैन, तर सर्दिया बगैचामा एक राम्रो वातावरण प्रदान गर्न सक्छ।
ईइनल अवरक्त हीटर IHS 2000 / 1 (2000 वाट,3पावर स्तरहरु, पुल स्विच, 186 सेन्टिमिटर सम्म समायोज्य, मौन) प्रदर्शन
प्रभावी क्वार्ट्ज हीटिंग तत्वहरू
3 पावर स्तर (650 / 1300 / 2000 डब्ल्यू)
सेट स्विचिंग चरणको प्रदर्शन
एंटी-टिप-ओभर सुरक्षा (माथि टिप गर्दा इकाई बन्द गर्दछ)
ऊँचाई ट्यूब समायोज्य
आधुनिक परिवर्तन तालिका उज्ज्वल हीटर कार्यात्मक, शक्तिशाली, ऊर्जा-बचत र नेत्रहीन अपील गर्दै छन्। उपकरणहरू स्थापना गर्ने वा केही हातहरूसँग सेटअप गर्न यो उपयुक्त छ। उपकरणहरूको तुलनामा स्थायी रूपमा स्थापित पर्खाल इकाइहरु अतिरिक्त सुरक्षाको ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछ।
बूथहरू सामान्यतया विस्तृत स्थिर पैर छन्, जसले अधिकतम समर्थन सुनिश्चित गर्दछ।
अवरक्त टेक्नोलोजीको साथ आधुनिक हेटरहरूको औसत उत्पादन मात्रा लगभग 600 वाट हो। पछि प्रयोग गर्न थप शक्तिशाली यन्त्रहरू प्रयोग गर्नुहोस्। यो एक उपकरण मा निवेश को लायक छ कि पहिले को एक बदलती तालिका मा एक कोमल हीटिंग को सुनिश्चित गर्दछ र जसमा पछि बलियो हीटिंग रडहरुको उपयोग गर्न सकिन्छ।
अघिल्लो लेखहात नाउहरु
अर्को लेखगिगाबिट स्विच